UJohn Daly Phuza Iiphunga (Nokuba Kuthiwa Ngaloo nto)
Yintoni isiselo sikaJohn Daly ? Ingubo yokutya, efanelekileyo, ifake i-lemonade kunye ne-vodka. Unokuyicinga njengento yokuphuza i- Arnold Palmer apho utywala-ngokuqhelekileyo, kodwa kungekhona kuphela, i-vodka-ifakiwe.
I-Reciprocal Basic John Daly
1 i-lemonade yenxalenye
1 inxalenye yeti
Izikhokelo: Hlanganisa iibhola ezincinane zeglasi kwigalazi ende. Gcwalisa ihafu ye-teyi ye-iced, yonke i-lemonade. Yongeza i vodka.
Gcina. Ukuhlobisa, ukuba unqwenela, kunye nekhadi lemon okanye i-orange peel.
Yiloo nto, i-cocktail yaseYohn Daly.
Imvelaphi yesiNtu sikaJohn Daly
Esi siphuzo sasihlala ixesha elide ngaphambi kokuba uJohn Daly abe nodumo. Ibuyela kwi " Arnold Palmer isiphuzo," umxube we-lemonade ne-ice tea eyayivela kwiigalo zegalufuuse kunye namagumbi okudlela ayenziwa yi-Palmer, owuthandayo umxube kwaye wayehlala ewucela.
Njengoko i-Arnold Palmer yakhula ekuthandeni, kuqala kuqala phakathi kwegalufa kwaye ke phakathi koluntu jikelele, abanye abantu baqala ukuzama ukungongeza utywala kuwo. Ezi ziguqulelo zotywala zidla ngokuba zibizwa ngokuthi "uAnnold Palmers."
U-Daly wafika kwindawo yokugalufa nge-splash, evela kwinto engenakwenzeka kuyo ukuphumelela i- PGA Championship ka - 1991 . Ngenxa yokuqhuma kwayo, i-mullet haircut kunye ne-aw-shucks ngendlela, uDaly ngokukhawuleza waba yindoda eqhelekileyo kwiveki yeveki.
Hayi, umsebenzi wakhe wakhawuleza waba neengxaki kwiingxaki ze-on-and-course-course.
Eminye yale micimbi yavela ngaphandle kwothando lukaDaly (ngaloo mihla) yesiselo. Yaye kungekhona nje iCokes Cokes eyayikuxhamla ngokukhawuleza, kodwa utywala.
Nangona singazi ngokuqinisekileyo xa kwaye isiphuzo sikaJohn Daly sasibizwa okokuqala, mhlawumbi sasiqala ngasekuqaleni kweminyaka ye-1990, xa uDaly kuqala eqala ukuba neengxaki ezinxulumene neziyobisi.
Ngoko, ngelishwa, simele sithethe ukuba isiselo sasibizwa ngokuba singamhloneli, kodwa ngakumbi njengentlanzi. Singazicingela iqela legalufa kwi-bar clubhouse. Omnye wabo wayala uArnold Palmer waza wabuza i-bartender ukuba yonge i-vodka. "Oo, uyithini na loo nto?" mhlawumbi wayecelwa. "UJohn Daly," weza impendulo, eneentsimbi ezijikelezileyo.
U-John Daly monicker waba nolwazi oluqhelekileyo kwaye wayeqhelekileyo, kwaye ekugqibeleni watshintsha "umntu omdala uAroldold Palmer" njengegama le-cocktail ethile.
Yintoni uDaly acinga ngegama?
Asazi ukuba ukusabela kwangasese kukaDaly kwaba ngowokuqala kokuva malunga "nesiselo sikaJohn Daly." Kodwa siyazi ukuba impendulo yakhe yoluntu yayinjani njengoko igama laqala ukubonisa kwimenyu.
Igama elithi "utywala lukaJohn Daly" okanye "i-cocktail yaseYohn Daly" yaqala ukuphuma kwi-bar kunye namanqaku okutyela njengesiqendu se-21 saqala kwaye saziwa ngokubanzi kangangokuba ngo-2010 uDaly ngokwakhe waqala ukuyibona kwimenyu, nokuva malunga nabanye.
Yabela njani? IGolest Digest yabhala malunga nendlela uDaly adlulisa ngayo (ngo-2010) ukusebenzisa igama lakhe ngale ndlela kwakuphawu lokuthengisa kakubi, kwaye wacela abalandeli ukuba bamxwayise nanini naxa bebona "isiphuzo sikaJohn Daly" kwimenyu.
Kodwa ngo-2011, u-Daly wagqiba ekubeni angene imali kwigama le-cocktail kwaye akhuliswe.
Ngaloo nyaka, kunye nabalingani ababini, uDaly wabumba iqumrhu elinyanisiweyo elibizwa ngokuba yi-GIASI Beverage Company. Ngo-2012, loo nkampani yaqala ukuthengisa, phantsi kwegama elithi "Original John Daly Cocktail". Eyokuqala ezintathu inkampani eyenziwe yiTeal yaseTy Sweet & Lemonade kunye neVodka, i-Peach Tea kunye ne-Lemonade kunye neVodka, kunye neTeksi ye-Raspberry ne-Lemonade ngeVodka.
Ngaphezu kukaJohn Daly Ukusela Iingcebiso
Kukho iintlobo ezininzi kwi-recipient yaseYohn Daly ebonakalayo ngasentla. Enyanisweni, unako ukongeza nayiphi na utywala oyithandayo kwisiqingatha se-lemonade ye-lemonade kwaye ubize u-John Daly.
Akunjalo na omkhulu umqhubi we vodka? Mhlawumbi ukhetha i-bourbon Daly:
Ii-ounces iced tea
Olunye uguquko longeza i-orange-flavored sequeur-triple sec, Cointreau, Grand Marnier, njl. Kunye ne-vodka:
0.25 ounces i-liqueur e-orange
Amalungu afana ne-lemonade kunye ne-iced tea
Unako ukuphumeza ukunambitheka kwe-orange ngokusebenzisa i-splash ye-orange juice kunokuba i-liqueur yase-orange.
Ukuze ukwenze kube ngaphezulu kwe-citrusy, unamathele kwi-liqueur yase-orange kodwa uhambe kunye ne-vodka ene-lemon-flavored:
1.25 i-ounces lemon-ifake i-vodka
0.25 ounces sec sec
Gcwalisa intsalela yeglasi ngehafu lemonade kunye nesiqingatha ngeti ye-iced.
Enye indlela yokudibanisa isiphuzo sikaJohn Daly, ukuba ukhetha iindidi ezintle kakhulu, kukusebenzisa itiye elimnandi kunokuba itiye i-iced ecacileyo.
Kwaye kunye nemigca efanayo, unokuba lula ukwenza izithako ezimbini nje ngale ndlela:
1 inxenye ye-vodka enotyiweyo ye-tea
Sandra Gal Igalari yezithombe
Intsana, Family Formicidae
I-Glossary yesiNgesi-yesiJamani: Indlu kunye neGumbi
Kufuneka ixesha elide iPhepha lam?
IsiCwangciso soSuku lweNgesi: 179 Nangona kunjalo, kunjalo, kunjalo
'Bell Song' ukusuka kwi-Opera 'Lakme' Iingoma kunye nesiNgesi